पञ्चायत र शाही शासनमा पनि नझुकेको न्यायालयले ध्वस्त भएको संविधान जोगाउनुपर्छ-टीकाराम भट्टराई — Imandarmedia.com
पञ्चायत र शाही शासनमा पनि नझुकेको न्यायालयले ध्वस्त भएको संविधान जोगाउनुपर्छ-टीकाराम भट्टराई
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान करिब-करिब ध्वस्त भएको भन्दै यसलाई न्यायपालिकाले बचाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासन र पञ्चायतकालमा समेत न्यायालय नझुकेको स्मरण गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा करिब करिब ध्वस्त भएको संविधान न्यायालयले बचाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस गर्दै भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायमा अवरोध गर्न नपाउने पनि स्पष्ट गरे । ‘न्यायपालिका र संविधानलाई जहाँ लान खोजिँदै छ, अहिले त्यो पूर्वाभ्यास हुँदैछ’, उनले भने, ‘जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि संविधान बचाउन यस्ता धम्कीलाई पार लगाउन यो अदालतसँग क्षमता छ । न्यायालयले त्यो क्षमता गुमाएको छैन ।’
उनले अगाडि भने, ‘न्यायपालिकाको आदेशविरुद्ध कार्यपालिकाको यो सम्मको हमला ? रेक्युजल कुनै न्यायाधीश इजलासबाट हट्ने/हटाउने विषयमा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाउन पाउँदैन । संविधान करिब करिब ध्वस्त भएको छ । न्यायपालिकाले बचाउनुपर्छ । राजाको शाही शासनमा पनि यो अदालत झुकेन ।’ उनले पञ्चायत र राजाको पालामा हुन नसकेको हुर्मत गणतन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन्छ भनेर न्यायपालिका टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुने पनि बताए ।
यस्तै बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएपछि सत्तापक्षका वकिलले त्यसको विरोधमा बखेडा झिकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले निवेदन पेश गरेपछि बखेडा भएको हो ।
अधिवक्ता घिमिरेले निवेदन फिर्ता नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले चेतावनी दिएका छन् । अधिवक्ता घिमिरेले पेश गरेको निवेदनमा ११ न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
अधिवक्ता घिमिरेले कुन न्यायाधीश कुन पार्टीको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन् भन्ने आधारमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश राणाले आपत्ति जनाएका हुन् ।